दरवार ह त्याकाण्ड पछी कहाँ छन राजा बिरेन्द्रका नातीनिहरु ? गुमनाम किन छन ? खुल्यो रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस) – Khabar28media
दरवार ह त्याकाण्ड पछी कहाँ छन राजा बिरेन्द्रका नातीनिहरु ? गुमनाम किन छन ? खुल्यो रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस)
लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रका नातिनी गिर्वाणी र सुरंगनालाई धेरैले खोजिरहेका छन् तर उनीहरु अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छैनन् । सञ्चारमाध्यममा मात्रै होइन औपचारिक कार्यक्रममा समेत कमै मात्रै देखिने गरेका छन् उनीहरु देखिने गरेका छन् उनीहरु । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्**
सामाजिक सञ्जाल र सर्च इन्जिनमा समेत उनीहरुको गतिविधि पाउन मुस्किल छ । उनीहरु कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पारिवारका अत्यन्त नजिकका आफन्त बाहेक अरु कसैलाई थाहा छैन । जसलाई उनीहरुका बारेमा थाहा छ, उनीहरु यस विषयमा बोल्न चाहदैनन् । पूर्व युवराज पारस शाहका छोराछोरीहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहँदा गिर्वाणी र सुरंगना भने कुन दुनियाँमा छन् धेरैलाई थाहै छैन ।
Previous Article देशमा बेच्न जे छ त्यही बेच्छौं, तपाईहरुको टाउको दु’खाइ किन ?- प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापा
Next Article सबिता माताले गरिन २०७८ सालको नेपालको ड’रलाग्दो भबिस्यवाणी, के होला त अब ? (हेर्नुहोस भिडियो )